The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: Video : Beesha Sheekhaal ee reer Fiqi Cumar oo ku kulmay magaalada Diridhabe ee Itoobiya
Video : Beesha Sheekhaal ee reer Fiqi Cumar oo ku kulmay magaalada Diridhabe ee Itoobiya
Beesha Sheekhaal ee reer Fiqi Cumar oo ku kulmay magaalada Diridhabe ee Itoobiya iyo dhaq dhaqaq beesha si mamul madax banaan Magaalada Raaso looga dhiso kuna biiraan mamulka Somalida iyo qeyb kale oo rabta in ay Oromiya Gobolkooda ku biiraan. Dagaalkan waxaa ku dhintay 150 qof. Bal dhageyso daawo Videogan qeyb ka mid Sheekhasha ay leeyihiin Somali ma nihin oo Oromaan raaceyna.
Faahfaahin Dheeraad ah oo Kusaabsan Gubitaankii Magaalada Raaso
Friday, 11 November 2011 22:48
Waa warbixin aannu ka diraayinay sidii loogubay magaalada Raaso. Waxayna warbixintani kusalaysantahay macluumaadka aynasiiyeen dadka magaalada Raaso kunool. Labadii bari ee lasoo dhaafay waxaanu baaritaan kuhaynay sida loogubay qaybo kamid ah magaalada Raaso iyo dadka ka dambeeyay. Waxaanu laxidhiidhnay dad kala duwan oo jooga gudaha magaalada Raaso. Waxayna noo xaqiijiyeen in gubitaanka magaalada uu dhacay labo maalmood oo kala duwan. Dukaamada suuqa magaalada ayay kolkii hore jabsadeen maleeshiyo iyo koox booliska Dawlad Deegaanka Soomaalida katirsan, kadib ayay dab qabadsiiyeen suuqa magaalada.
Maalintii dambe ayay goor barqo ah hadana intii ka hadhay suuqa iyo xaafado suuqa ka agdhaw dab qabadsiiyeen. Dabkan labaad ayaa dhacay kadib markii ay dadka magaaladu ka dacwoodeen falka ay kooxda booliska deegaanka Soomaalidu ay kugubeen magaaladooda, halkaasna wuxuu hadal kudhexmaray dadkii dukaamadoodii lagubay iyo kooxdan katirsan booliska DDS, wuxuuna boolisku ugu goodiyay dadkii inay mar labaad ay dab qabadsiinayaan magaalada. Markii ay kooxda booliska Kililka Shanaadka katirsan ay mar labaad magaalada dab qabadsiiyeen, waxaa kusoo yaacay dadkii magaalada, iyaga oo iskudayay inay damiyaan, laakiin koox maleeshiyo ah iyo koox booliska deegaanka Soomaalida ah oo joogay magaalada ayaa udiiday inay dadku damiyaan guryaha gubanaya. Waxay dadka magaaladu noo xaqiijiyeen inay guryo badani gubteen, inkasta oo aynan jirin kharaaso naffeed ama cid wax kunoqotay dabka.
Dadkii iskudayay inay damiyaan dabka uu booliska deegaanka Soomaalidu kugubayay magaalada Raaso, ayaa iskuweedh laga qabtay, waana laxidhxidhay, iyaga oo lagu eedeeyay inay iyagu gubeen magaalada. Dadka laxidhxidhay ayaa kor udhaafaya dhawr iyo labaatan, oo isuga jira dumar, caruur iyo rag. Qaar kamid ah waxgaradka magaalada ayaa iskudayay inay kooxdan booliska ah dacwad ugu tagaan, si ay ucodsadaan in dadka lasiidaayo. Waxgaradkii dacwada ugu tagay kooxdan dadka xidhxidhay ayaa qoryo lagu qabtay, waxaana laxidhay qaar kamid ah waxgaradkii. Dadkan shacabka ah wali way xidhanyihiin.
Waxay dadka deegaanka Raaso noosheegeen inuu falkani yahay fal ay xuukadda Dawlad Deegaanka Soomaalidu soo maleegtay, iyada oo doonaysa inay dambi ugusameyso beesha SHEEKHAAL ee degta deegaanka Raaso, si dhibaatooyin kala duwan loogaadhsiiyo beesha. Waxaa kale oo dadka magaalada Raaso noo xaqiijiyeen in kooxdan booliska ah ay bilaabeen inay dadka shacabka ah dhibaan, iyaga oo qashqashaad ugaysta dadka safarka ah ee magaalada maraya, kaarkoodna kala daga baabuurta, qaar kalana garaacid iyo jidh dil ugaysta.
Dadkii horay udaganaa magaalada Raaso oo lagu qiyaasayay 40 ila 50 kun oo qof ayaa horay uga qaxay magaalada iyaga oo sheegay inay lasuugeen siyaasadda guracan ee dawlad deegaanka Soomaalida ee ku aadan deegaanka Raaso iyo dagmada laqaybiyay, waxayna ugudbeen dhanka Ismaamulka Oromiya oo soohdin la'leh deegaanka Raaso. Magaalada Raaso oo kutaalla soohdinta Soomaalida iyo Oromada ayay ku hadheen koox boolis ah oo yar oo katirsan Dawlad Deegaanka Soomaalida, waxaana deegaanka si wayn ujooga ciidanka federaalka oo ilaaliya mashaariicda kasocota deegaanka Raaso iyo dagmooyinka xuduuda la'leh ee Oromada, mashaariicdaas oo ay kamidyihiin mashruuca koronto galinta, mashruuca tilifoon galinta iyo mashruuca wadada.
Heshiiskii Taariikhiga Ahaa ee Dhexmaray Xukuumada DDS iyo Beesha Aw-Qudub: Qodobada Heshiiska Shirka
Submitted by webmaster on Fri, 2012-04-06 21:28
Dire Dawa (kilil5)--Baaqa Shirka nabaddaynta, maamulka suuban iyo horumarka ee loo qabtay Beesha Sheekh/Fiqi Cumar ee Deggan degaanka Soomaaalida Itoobiya, Shirakaasi oo laga soo qaybgaliyey wakiiladda Beesha Sheekhaash. Shirkaasi oo wadjir u soo qabanqaabiyeen Xafiiska Golaha Federeeshinka iyo Dawaldda Degaanka Soomaalida Itoobiya.
Megaabiit 25-27, 2004
Dire Dawa Itoobiya.
Wakiilada Beesha Sheekhaash ee ku nool degaanka Soomaalida itoobiya waxay in muddo ah ka cabanayeen ka qaybgal la’aan maamulka degaanada ay ku noolyihiin, kaasi oo ay u gudbiyeen golaha Federeeshinka. Waxa laga warqabaa in xafiiska golaha Federeeshinku muddo baddan arintan ka shiray go’aananaa ka soo saaray. Iyada oo laga duulayo go’aanadaasi, Dawaldda Degaanka Soomalalidu iyadoo aad u danaynaysa xal u helidda dhibaatadaas, waxay qaaday tallaabo degmo lagaga dhigayo degaanka Beeshu degantahay ee Raaso. Talaabadani waxay ahayd mid loo qaaday dhinca wanaagsan, waxa kale oo ay mudnayd in la taageero. Hase ahaatee, go’aankaasi oo beeshu ku qancin darteed, tani xal waara ma noqon. Haddaba, si arintani loo soo afjaro, xafiiska Golaha Federeeshinku isagoo la kaashanaya, xafiiska Ra'iisal wasaaraha, Wasaaradda arimaha fedraalka, dawaladda degaanka Soomaalida, iyo cidda kale ee arintani khusaysaba waxay dedaal dheeri ah u galeen sidii loo fulin lahaa go’aankii kasoo baxay golaha Federeeshinka. Si la iskugu soo dhaweeyo Dawladda degaanka Soomaalida iyo wakiiladda beesha, waxa lama huraan noqotay in la qabto shirweynahan.
3. Waxaan taageersanahy, hirgalintiisana aan ka qayb qaadanaynaa, Go’aanka dawladda degaanka Soomalida Itoobiya ee ahaa in beeshu meelaha ay degantahay, ay ka helaan xubno u matala maamulka gobolda, degmooyinka iyo qaabdhismeedka xisbigaba, si caddaali ah.
Wakiilka Dawladda Degaanka Soomaalida_____________________
Afhayeenka Golaha Federeeshinka_____________________________________________________
Wakiilka Wasaaradda Arimha Federaalka________________________________________________
27, Ginboot, 20045 April, 2012.
Dhinaca kale,sida ay xubno ka agdhow madaxwaynaha deegaanka Soomalida iyo mas'uuliyiinta beesha Qudub kilil5 usheegeen in shirkan taariikhiga uu ku xigi doono shirwayne kale oo dhexmari doona beesha Awqudub iyo beehsha Ogaadeen.Shirkan ayaa sida labada dhinac noosheegeen,ujeedadiisu tahay dib usoocelintii walaaltinimada beesha aw-qudub iyo beesha Ogaadeen.Ujeedada kale ayaa ah bay dhaheen in lamataaneeyo wixii hada ka dambeeya siyaasada guud ee beesha Ogaadeen iyo beesha Sheekhaal wadanka Itoobiya iyo Geeska Africa guud ahaan.waxaad wararkayaga dambe idiinkusoogudbin doonaa documentiga oo kudhanyihiin saxiixyada mas'uuliyiinta sadexda garab ee kala ah dawlada dhexe,dawlada deegaanka Soomalida iyo madaxda beesha Qudub.
Posted by DIRSAME at 7:54 PM